सौराहा जंगल सफारी - MeroReport
Posted by Gayatri Bhatta on February 16, 2012 at 3:00pm
मान्छे स्वभावैले स्वतन्त्र प्रेमी प्राणी । अति व्यस्त यो जीवनमा कहिले काहिँ यो दैनिकीबाट छुटकारा पाएर कतै घुम्ने मौका पाइयो भने ठुलै उपलब्धी हासिल गरियो जस्तै भान हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्ने हो भने मलाई पनि नयाँ ठाउँमा घुम्ने, नयाँ भेषभुषा भएका तथा परम्परा र संस्कृति अंगालेका जीवनशैली बुझ्न तथा विभिन्न ठाँउमा प्रकृतिको यथास्थिति बुझ्न खुब रुची जाग्छ, त्यसैले यसो बेलाबखत मौका मिलिहाल्यो भने उक्त मौकामा चौका हान्नको लागि सकेसम्म भरपुर प्रयास गर्दछु ।
यस्तै प्रसंगमा मैले पछिल्लो पटक गरेको १ रात बसोबास सहितको काठमाडौं सौराहाको यात्राबारे स्मरण गर्न चाहन्छु । यो यात्रा कार्यलयसँग नै सम्बन्धित छ । कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा एक अर्कामा समन्वय एवं भाइचारामा वृद्धि गर्न हरेक बर्षमा हाम्रो कार्यालयको एउटा विभागले आफ्नो विभाग अन्र्तगतका कर्मचारीहरूलाई समेटी पिकनिक तथा घुमघाम कार्यक्रमको आयोजना गर्दछ । यसैगरी हाम्रो घुम्ने तथा रमाउने स्थानको छनोटमा यसपल्ट चितवनको सौराहा परेको थियो ।
भाद्र महिनाको ९ गते शुक्रबार गएर भोलिपल्ट दिउँसो फर्कने कार्यक्रम रहेको थियो । गर्मी महिना नै भए पनि काठमाडौंमा विहान र बेलुका बखत चिसो सिरसिर हावा चल्ने गर्दछ ।
विहान ६ बजे गाडि चडिसक्ने योजना बमोजिम हामी करिब साढे ५ बजे कलंकीमा पुगिसकेका थियौं । कोहि निजी साधन लिएर जानेहरू आफ्नै सुरमा जाने तरखरमा थिए यद्यपि हाम्रो कार्यक्रमको योजना बमोजिम करिब १२ बजे भित्र सौराहा पुगिसक्नुपर्ने थियो ।
करिब १५।१६ जना रहेको हाम्रो समूहको लागि एउटा माइक्रोबस रिजर्भ गरिएको थियो । हाम्रो समुहमा म र अर्को एक दिदी (सुलोचना) थियौं । सबै जना उस्तै–उस्तै रमाइलो गर्नुपर्ने र लागभग सबैजना उस्तै वर्गका भएकाले गर्दा हाम्रो घुमघाम कार्यक्रम रमाइलो हुने विश्वास थियो । सबैजना आइसकेपछि करिब ६ बजेतिर माइक्रोबसमा चढेर हामी चितवनको सौराहातिर लाग्यौं ।
प्राकृतिक मनोरम दृश्यले धनि हाम्रो देश डाँडाकाडा पहाडहरू हरियाली एवं मनोरम सुन्दर दृश्यले भरिपूर्ण छ । त्यस्ता दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै ठाउँ ठाउँमा फोटो खिच्दै रमाइलो गर्दै हाम्रो गन्तव्य चितवनको सौराहातिर अगाडि बढिरहृयौं ।
काठमाडौं जुनसुकै मौसमको लागि एकदम ठीक लाग्छ मेरो अनुभवमा । यहाँको जस्तो मिलेको हावापानी नेपालकै सायद अन्य जिल्लाहरूमा छैन । काठमाडौंको मौसममा जीवन काटेका हामीहरूलाई नारायणघाटमा एकछिन ओर्लदा निकै गर्मीको महसुस गरियो । जतिखेर पनि आइसक्रिम खानुपर्ने । पानी पनि फ्रिजमा राखेको खानुपर्ने, तै पनि गर्मी हुन छाडेको होइन । एकैछिन रोकेपछि उक्त माइक्रोबसले हामीलाई सौराह चोकसम्म पुर्‍याइदियो । उक्त चोकबाट चाँही हामी आफ्नै किसिमले हाम्रो होटेलसम्म पुग्नुपर्ने थियो ।
त्यहाँ स्थानीय सवारी साधनको रूपमा टाँगा, गाढा, रिक्सा आदि चलाईंदो रहेछ्, ती मध्ये टाँगा सबैभन्दा बढी चल्दोरहेछ । करिब ७।८ जनासम्म बोक्न सक्ने गरी अगाडि र पछाडि फर्किएर बस्नेगरी छानो राखी बनाएको सिटको तल दुई छेउमा दुईवटा पाग्रा र उक्त बस्ने साधनलाई अगाडि एउटा घोडाले तान्दो रहेछ । जसलाई एउटा टागाँ चालकले चलाउँदो रहेछ । त्यो टन्टलापुर घाम अनि त्यति धेरै मान्छेहरू बसेको साधनलाई तान्नुपर्ने विवशता त्यो घोडालाई देखेर माया लाग्यो । उसको ढाड छाम्दा तातोले हाम्रो हात पोल्यो । फेरि मलाई मात्र माया लागेर के गर्नु उसको काम नै त्यही हो । हामीहरू २ वटा टाँगा प्रयोग गरेर लाग्यौं, सौराहा भित्रको होटेलतिर ।
टागाँभित्र बसेपछि त घोडाको सुस्तगतिमा चल्दा सरर हावामा दायाँ बायाँ अगाडि तिरको दृश्य हेर्दै जाँदा कम रोचक भएको थिएन अलि पर पुगेपछि अलि रमणीय स्थलमा टागाँलाई रोकी सबैले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार फोटो खिचियो । टागाँ चलाएको जस्तो गरेर घोडा चढेर फोटो खिच्दा खुब रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर । त्यसपछि फेरि टागाँमा बसी होटेलतर्फ लाग्यौं । होटेलमा पुग्दा हाम्रो मुख्य सर तथा अन्य शाखाका कर्मचारीहरू पुगिसकेका रहेछन् । अनि सरले सबैलाई आधा घण्टामा फ्रेस भएर बिहानको खानाको लागि आउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसपछि हरेक दुईजनाको लागि एउटा रुम थियो सुलोचन दिदी र मेरो लागि स्पेशल रूमको व्यवस्था गरिएको थियो । हामी हाम्रो रूममा गयौं । बाफरे कति गर्मी रूममा सुरुमा एकछिन बसेर दुवैले नुवायौं ।
ओहो, त्यहाँ त नुहाउँदा पनि तातोपानीले नुहाए जस्तो अनुभव भयो मलाई । नुहाएर बाहिर निस्कन पाएको छैन एकछिनमा नै पसिनाले निथ्रुक्क भइयो । अनि हामी सबैले खाना लिएर जङ्गल सफारीको लागि तयार भयौं । दुईवटा गाडि रिर्जभ गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल सफारीतर्फ लागियो । वाहा, चारैतिर हरियाली बनजङ्गल बीचमा सानो रोड, यसरी बीच जङ्गलबाट हिंड्दा विभिन्न जंगली जनावर देखिदो रहेछ । धेरैजसो हामीले त्यहाँ मृग देख्यौं । चराचुरुङगी र बादरहरू त प्रायः ठाउँ–ठाउँमा देखिन्थे । बीस हजारी तालमा पुगेपछि गाडि रोकियो । अनि हामी ओर्लिएर पैदल सफारी गर्‍यौ । वाह, बीस हजारी ताल अगाडि गएर त्यो दृश्य हेर्दा साँच्चै नै मन एकदमै आनन्द हुन्थ्यो । घना जंगलको बीचमा यो ताल अतिनै सुन्दर, रहेछ । यो तालको एउटा छेउको कुनापट्टी एउटा गैडा बसेको देखियो हल्ला गर्नु नहुने हुनाले विस्तारै सबै जनाले गैडा हेर्‍यौ अनि फोटो पनि खिच्यौं ।
लगभग १ घण्टा जति त्यहाँ वरपर डुलेपछि हामी सौराहाको सन सेट हेर्ने स्थल नारायणी नदीतिर लाग्यौं तर त्यहाँ आउँदा अलि बढी समय बितेकाले सनसेट राम्रोसँग हेर्न पाइएन । यद्यपि त्यहाँको रात्री मनोरम दृश्यले चाहिँ मनलाई तानिरहको थियो ।
फेरि पनि हामी पसिनाले निथ्रुक्क भएका थियौं । होटेल फर्किएपछि फेरि नुहाएर पछि साँझमा १ घण्टाजति कार्यालयको औपचारिक कार्यक्रम भयो । त्यसपछि रात्रीको खाना खायौं । अनि करिब १०।११ बजे सुत्यौं । अब बिहान उठेर सबैजना आ–आफ्नो इच्छा अनुसार घुम्न निस्कियौं डुङ्गा सवारमा । त्यहाँको डुङ्गा एउटै काठले बनेको साधुरो हुँदो रहेछ । एउटा डुङ्गामा करिब ८।९ जना बस्न मिल्ने । हामीले एउटा डुङ्गामा ७।८ जनाको दरले बसेर डुङ्गा यात्रा गर्‍यौ । त्यत्रो ठुलो राप्ती नदी अनि साघुरो डुङ्गा । यसो एकजना दायाँ बायाँ गर्‍यो भनेपछि डुङ्गा हल्लिने अनि डर लाग्ने । नदिको बीचमा पुगेपछि त डुङ्गा बीचमा पुगेको डुब्न लागेको जस्तो भान भयो । मेरो पहिलो पटक थियो चितवनमा डुङ्गामा चडेको । एकदमै डर लाग्यो फेरी एक मनले सोचे केही भएछ भने पनि म एक्लै होइन जस्तो लाग्यो । करिब १ घण्टा डुङ्गामा जलयात्रा गरेपछि अब फेरि हिडेर जंगल सफारीतर्फ लाग्यौं । हात्तिवारमा हातिहरू र छावाहरूको नुहाउने घाम ताप्ने मनोरम दृश्य देखिरहेको थियो । लट्ठी टेक्दै हिलोमा टेक्दै जंगल सफारी गरियो त्यहाँ पनि हामीले गैडालाई देख्यौं, फोटो खिच्दै हल्ला गर्दै हिड्दा २।३ घण्टा बितेको पत्तै भएन त्यति बेला १० बजिसकेको थियो । हामीसँगै हाति चढ्ने फुर्सद भएन । त्यसपछि होटेल फर्कियौं । अनि फेरि नुहाएर फ्रेस भएर बिहानको खाना खाएर करिब १२ बजेको थियो ।
त्यसपछि हामीलाई काठमाडौं फर्किनुपर्ने थियो । त्यो दिन एउटा दुर्घटनाको कारणले सडक बन्द गरिएको रहेछ । अब परेन त फसाद एउटा लोकल गाडिले हामीलाई भित्रभित्रै कताकताबाट नारायणघाट पुर्‍याइदियो । त्यहाँ त गाडी चलेको थियो । समय अभावको कारण म आफ्नो आफन्त कहाँ पनि बस्न पाइन्न ।
अनि फेरि हामी नारायणघाट पुगेपछि एउटा माइक्रोबस रिजर्भ गरेर काठमाडौं फर्कियौं । बढी थाकिएको थियो । करिब साढे २ मा त्यहाँबाट हिंडेको माइक्रो बस करिब ८ बजे मात्र कलंकी आइपुग्यो । सबैजनालाई घरबाट लिन आएका थिए । तर घरबाट लिन नआएका साथीहरू चाहिँ मिलेर ट्याक्सीमा घरतिर लागे । मलाई लिन मेरो भाई पुगेको थियो, सबैजनासँग बिदा भएर आ–आफ्नो घरतर्फ लागियो ।
समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा सौराहा यात्रा अत्यन्त रोचक एवं महत्वपूर्ण रह्यो । १ दिनको लागि भएपनि प्रकृतिसँग रमाउन पाउँदा यो मन खुशीले फुरुङ्क भएको छ । अहिले पनि ती फोटाहरू हेर्दा ती क्षणहरू सम्झदा त्यही प्रकृति रमाइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई ।
Comment by Khemraj Gaunle on October 29, 2013 at 7:00pm
Comment by Gayatri Bhatta on February 21, 2012 at 10:58am
Thank you so much Indradhoj jee :)
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 21, 2012 at 10:51am
Nicely written and also supported by good pictures. Keep writing.
Comment by Gayatri Bhatta on February 17, 2012 at 1:01pm
Comment by Devi sapkota on February 17, 2012 at 12:48pm
Comment by JawKnockRaazaa on February 17, 2012 at 12:29pm
Nicely written! :)) LIked!
Comment by Gayatri Bhatta on February 17, 2012 at 11:33am
Thank you for your coment, I'll try to write more better in future :)
Comment by Prakash Lamichhane on February 17, 2012 at 10:16am
सुरुवात राम्रो छ । यो तपाइको कृति पढ्न पाएको मेरो पहिलो अनुभव भएकाले लेखकिय कलामा समिक्षा गर्न सकिन । तर आउँदा दिनहरुमा पनि पढ्न पाउने अपेक्षा गर्छु ।
Comment by Gayatri Bhatta on February 17, 2012 at 10:09am
Thankyou Binaya jee for your coment this is my first attempt to write so I'll do more better ahead.. thankx again :)
Comment by Binaya Shekhar on February 16, 2012 at 11:38pm
Well, लेख राम्रो छ । तर शैलीलाई अझ रोचक बनाउन सकिन्थ्यो । अनि शिर्षक र भित्री बर्णनको तालमेल अलिक मिलेन । म भएको भए शिर्षक सायद काठमाण्डौदेखि सौराहासम्म राख्थे होला । र पनि धेरै जानकारीमुलक छ लेख । प्रयास जारी गर्नुहोला ।